Kulanka Jimcaha- Xalaqada 28aad Al-Saadicuun Bil-Xaq
Kulanka Jimcaha- Xalaqada 28aad
Waxaa kulankaan looga jawaabayaa su'aasha ah: (maxay tahay Jaahiliyo?). Jaahiliyo waxay ka mid tahay ereyada fahamkoodu uu wareerka ka jiro, oo dadka maanta ay khalad ka fahmeen. Qur'aanku afar meel bay ku soo aroortay. Waxaa kulankaan lagu falanqaynayaa macnaha saxda ah ee Jaahiliyo, iyo siyaabaha uu Qur'aanku u adeegsaday.
Liis Kulanka Jimcaha
kulanka 27aad final s
kulanka Jimcaha 29
Waxaa kulankan looga jawaabayaa su'aasha ah (maanta dunida jaahiliyo maka jirtaa? Sideebayse jaahiliyo ku noqotay?) Ka dib markii kulankii u dambeeyay laga hadlay astaamaha afarta ah ee jaahiliyo lagu garanayo, ...
Kulanka Jimcaha- Xalaqada 30aad
Waxaa kulankan 30aad looga jawaabayaa su'aasha ah: "Shirki muxuu yahay? Khatartiisuna maxay tahay?". Waxaa lagu soo bandhigayaa kulankan macnaha uu leeyahay ereyga shirkiga, luqad ahaan iyo sharci ahaan labadaba. Waxaa ...
Kulanka Jimcaha- Xalaqada 31aad
Su'aasha kulanka: (Qaybaha shirkiga maxay yihiin? Qaababkee buuse ku yimaadaa?) Waxaa kulankan lagu lafa gurayaa noocyada shirkigu leeyahay, sida ay culumada islaamka u qaybiyeen. Waxaa jira shirki akbar (wayne) oo ...